प्रभु लाइफ इन्स्योरेन्सको तेस्रो वार्षिक साधारण सभा सम्पन्न « Lokpath
२०७७, २९ आश्विन बिहीबार १५:०५
प्रकाशित मिति : २०७७, २९ आश्विन बिहीबार १५:०५
काठमाडौं । प्रभु लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेडको तेस्रो वार्षिक साधारण सभा सम्पन्न भएको छ ।
बिहीवार एक कार्यक्रमकाबीच काठमाडौं म्यारियट होटल, नक्साल, काठमाडौंमा कम्पनीका अध्यक्ष डा. आत्माराम घिमिरेको अध्यक्षतामा सम्पन्न भएको हो ।
२०६४ सालमा दर्ता भै २०७४/०८/२८ देखि बीमा व्यवसाय कारोबार संचालन गर्दै आएको यस प्रभु लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेडका संचालक समितिमा अध्यक्ष डा. घिमिरे लगायत संचालक सदस्यहरुमा सुभाष अमात्य, रामेश्वर सापकोटा, नरेश बहादुर मल्ल तथा प्रभु बैंकका तर्फबाट मनिराम पोखरेल रहेका छन् ।
साधारण सभाले कम्पनीको सञ्चालक समितिको तर्फबाट अध्यक्ष डा. घिमिरेद्वारा प्रस्तुत गरिएको वार्षिक प्रतिवेदन पारित गर्दै लेखापरीक्षकको प्रतिवेदन सहितको आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को वासलात, नाफा नोक्सान हिसाब, नगद प्रवाह विवरण लगायतका वित्तीय विवरणहरु समेत पारित गरेको छ ।
फोनबाटै लोन लिन सकिने कुमारी बैंकको नयाँ योजना
काठमाडौं । कुमारी बैंक लिमिटेडले आफ्ना ग्राहकहरुको सुविधाका लागि फोनलोन कर्जा सुविधा सार्वजनिक
अब सिद्धार्थ बैंकको क्रेडिट कार्ड आवेदन अनलाईनबाटै दिन सकिने
काठमाडौं । सिद्धार्थ बैंक लिमिटेडले यहि कार्तिक १३ गते देखि अनलाईन मार्फत क्रेडिट
स्टायाण्डर्ड चार्टर्ड बैंकको लाभाशं प्रस्ताव, कति प्रतिशत दिँदै छ बोनस र नगद ?
काठमाडौं । स्टायाण्डर्ड चार्टर्ड बैंकले गत आर्थिक वर्षको मुनाफाबाट लाभांश वितरण गर्ने धोषणा
काठमाडौं । नेपाली बजारमा शुक्रवार १ अमेरिकी डलरको खरिददर ११८ रुपैयाँ २७ पैसा